Filtrer les éléments par date : jeudi, 17 juin 2021
jeudi, 17 juin 2021 22:45
Nanao Filankevitry ny Minisitra manokana ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny visioconférence, izay nandraisan'ny Praiminisitra anjara sy ireo minisitra vitsivitsy.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, dia notendrena ho lehiben'ny Etamazaorin'ireo Tafika, Chef de l'etat major des Armées, ny Général de Division SAHIVELO Lala Monja Delphin.
Ny Filoha Rajoelina moa dia any Frantsa ankehitriny hanatrika ny confirmation -njanany vavy, ary mody an-tanindrazana ny alahady izao.
jeudi, 17 juin 2021 22:37
Ady amin’ny Covid-19 : Andro farany amin’ny fanaovam-baksiny androany
Ity alakamisy 17 jona 2021 ity no andro manakatona tanteraka ny fanaovam-baksiny andiany voalohany iadiana amin’ny valanaretina Covid-19, manerana an’i Madagasikara. Tsy hisy intsony rahampitso satria efa tonga eo amin’ny fetra farany ny vaksiny nomena antsika.
Covishield ny anaran’ny vaksiny nomena an’i Madagasikara, taorian’ny nidirantsika anatin’ny « Initiative Covax ». In-droa miantoana ny tsindrona atao azy io, mielanelana herinandro maromaro. 250 000 fatra no nomena antsika tamin’ny andiany voalohany.
Tamin’ny 10 may 2021 no nanombohana ofisialy ny fanaovana io vaksiny io teto Madagasikara. Tao amin’ny CHU HJRA Ampefiloha no nanatanterahana izany. Ny minisitry ny fahasalamana ny Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis no nisantatra ny fanaovam-baksiny.
163 000 fatra teo no vita tsindrona araka ny fanazavan’ny minisitra androany. 65% fatra nomena antsika no vita vaksiny.
jeudi, 17 juin 2021 22:36